The EU na-aga n'ihu na - Holger Nilsson | Flammor - profetisk tidskrift
The EU na-aga n'ihu na - Holger Nilsson
The EU na-aga n'ihu n'ebe United States of Europe - Holger Nilsson
Bipụtara na March 2006
European nzuko omeiwu na Strasbourg
The n'ókè nke ebe EU bụ ụzọ, na-abịa. Ndị a n'ókè-enye anyị ozi ọma, na ihe anyị na-ịhụ ugbu a na Europe, ga-anọgide na ka ha webata na superpower, dị ka Bible na-akọwa na adọ aka ná ntị.
N'afọ gara aga, e dechara, na ọhụrụ malitere na ndị dị otú ahụ n'ókè ga-kọwara ebe a n'elu. SVT si News Broadcast December 30 dị ka ẹkenịmde N'ajụjụ ọnụ Belgium Prime Minister. Na a na-adịbeghị anya n'akwụkwọ, ọ họpụtara ndị ọzọ ike ka EU.
"A United States of Europe?" Jụrụ onye nta akụkọ. "Ee, United States of Europe" gosiri na praịm minista mgbe a ọnụ ọchị na-agbasa gafee egbugbere ọnụ ya. Mgbe ahụ, anyị chọpụta na ihe dị mkpa nzọụkwụ kwupụta nke a bụ na ha amaghị na ahụ niile EU ụmụ amaala ga-akwụ a pụrụ iche tax ozugbo Brussels. Nke a kwesịrị a kpọmkwem njikọ n'etiti ụmụ amaala na European Union, kpọsaa ya on.
Ọzọkwa, ọ kọrọ na a amaghị na natara nkwado nke ọtụtụ ndị ndú ndị ọzọ dị ka German chancelo Angela Merkert na Austrian chancelo Wolfgang Schüssel.
Ihe anyị na-ahụ n'ebe a bụ na isi ike na Europe aiming n'ihu ma na ụmụ amaala ga-kegide elu ọbụna karị na superpower. Ọ na-adịghị agba àmà ihe ọma na-ewere na nke a bụ ihe anyị na-aghọta na-ebe dị ka okwu amụma.
Na nke a abụghị nanị ihe ndị dịpụrụ adịpụ amaghị ma pụtara oké njọ, anyị na-e mesịrị enen.
The ọhụrụ họpụtara president nke EU, Austria nke Wolfgang Schüssel mere ya oghere okwu nzuko omeiwu na 18 January. Mgbe ahụ, ọ kpọbatara ọbụna elu echiche nke a pụrụ iche EU tax. The okwu sochiri ịnụ ọkụ n'obi na ọṅụ nke nzuko omeiwu. Onye ọ bụla Otú ọ dị, ghọta amụma ịdọ aka ná ntị n'ihi na nke a mmepe, dịghị ekere òkè n'ihe a na ịnụ ọkụ n'obi.
Wee na mmepe nke Europe. Anyị na-eso amụma-amụ anya.
Gwa a enyi